Nicolas Pepe oo markiisii ugu horreysay lagu Sawiray maaliyadda Kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 31 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa indhaha ku haysa inay dhammaystirto saxiixa Nicolas Pepe kaasoo ay 72 milyan oo gini uga soo wareegaya naadiga Lille, waxaana xiddigan garabka ka dheela markii ugu horreysay lagu sawiray maaliyadda Arsenal.
Xiddiga xulka qaranka Ivory Coast ayaa soo gaaray Magaalada London Insiintii si uu tijaabada caafimaad ugu maro Gunners, isla markaana uu u dhammaystiro heshiiska uu ugu wareegayo garoonka Emirates.
Arsenal ayaa tartanka Weeraryahanka Pepe kaga guuleysatay kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub oo ay ka mid yihiin Manchester United iyo Paris Saint-Germain.
Weli si rasmi ah looma shaacin saxiixa laacibkan, laakiin waxaa baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka qabsaday sawirka laga soo qaaday 24-sano jirkaan Pepe oo xiran maaliyadda cusub ee kooxda Arsenal.
Pepe ayaa noqon doona saxiixa ugu qaalisan taariikhda kooxda Arsenal iyo saxiixa afaraad ee Gunners xagaagan kaddib Gabriel Martinelli, Dani Ceballos iyo William Saliba.